प्रकाशित मिति: Aug 10, 2020 4:52 PM | २६ साउन २०७७
अर्थविद्हरुले भारतको जिडिपी सन् २०२०/२१ वित्तीय वर्षमा तीव्र संकुचन हुने चेतावनी दिएका छन्। सन् १९७० को दशक यताकै सबैभन्दा खराब अवस्थाको मन्दीमा भारत प्रवेश गर्ने चेतावनी पनि अर्थविद्हरुले दिएका छन्।
'म यसलाई मन्दी जस्तो स्वाभाविक फेसनेबल शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न,' सिंह भन्छन्, 'तर गहिरो र लामो समयको आर्थिक सुस्ततालाई भने अब नकार्न सकिँदैन। यो आर्थिक सुस्तता मानवीय संकटका कारण पैदा भएको हो। त्यसैले हामीले समाजको मनोभावना र सामाजिक अवस्थालाई हेर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ न कि आर्थिक आँकडा र विधिहरु।'
भारतको स्वतन्त्रता पछिकै सबैभन्दा खराब संकुचनको अवस्था आउने भनि अर्थविद्हरुले बनाएको समान रायलाई मनमोहन सिंहले 'सत्य नहोस्' भन्ने आशा गरेको बताए।
'तर त्यसबेला भारतले त्यही गरेको हो जुन विश्वले गरिरहेको थियो,' सिंह भन्छन्। -'र शायद लकडाउन त्यो चरणमा अत्यावश्यक नै थियो।'
'स्थानीय प्रशासन तथा स्वास्थ्य अधिकारीहरुले स्वास्थ्य तथा आकस्मिक उपचारहरुका विषयमा केन्द्रले बनाएको गाइडलाइनहरु स्थानीय प्रशासनले अलि छिटो लागू गर्न सकेको भए त्यसले अझ राम्रो परिणाम दिन सक्थ्यो,' उनले भने।
त्यसबेलाको संकट वैश्विक कारणले उत्पन्न आन्तरिक संकट भएको उनको बुझाई छ। उनी भन्छन्, 'तर आजको आर्थिक अवस्था तत्कालीन अवस्था भन्दा हरेक हिसाबले फरक, गहिरो र गम्भीर छ।'
'दोस्रो विश्व युद्धका बेला समेत पूरै विश्व सटडाउनको अवस्थामा थिएन, जस्तो अहिले छ,' उनले भने।
भविष्यमा सरकारले ब्यापार व्यवसायहरुलाई कसरी पुँजी प्रवाह गर्न सक्छन्? भन्ने प्रश्नमा मनमोहन सिंहले यसको एकमात्र उत्तर भनेकै 'ऋण लिनु' हो भने।
'तर अब भारत ऋण लिन अन्य विकासशील देशहरुभन्दा बलियो अवस्थामा रहेको छ,' उनले भने।
'अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुमा ऋणीका रुपमा भारतको ट्रयाक रेकर्ड बेदाग छ। त्यसैले पनि यस्ता दातृ निकायहरुबाट ऋण लिनुलाई कमजोरीका रुपमा लिनु हुँदैन,' उनले भने।
'अधिक मुद्रा आपूर्ति भइ उच्च मुद्रास्फीति हुन्छ भन्ने परम्परागत डर विकसित देशहरुमा अब छैन भन्न सकिन्छ। तर भारतजस्तो देशहरुमा जहाँ केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वायत्तताको सवाल पटक पटक उठ्छ, यस्तोमा नगद छाप्नुले मुद्रा, ब्यापार र आयातित मुद्रास्फीतिमा प्रभाव पार्छ,' उनले भने।
हालको अवस्थामा कोभिडको महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि त्यस बेलाको भन्दा भारतको कुन पक्ष सबल छ र केले सघाउला?
'सन् १९९० को अवस्थाभन्दा हाल भारतको वास्तविक जिडिपी १० गुना बलियो छ। र त्यस बेलाभन्दा अहिलेसम्म भारतले ३० करोड नागरिकलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाइसकेको छ,' उनले भने, 'त्यसकारण पनि हालको अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो छ भन्न सकिन्छ।'
'भारत अहिले विश्वसँग पहिलेभन्दा अझ बढी एकबद्ध भएर अघि बढेको छ। यस्तो अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावले भारतीय अर्थतन्त्रलाई पनि निश्चय नै प्रभावित बनाउँछ। यस महामारीको समयमा विश्व अर्थतन्त्रमा पनि नराम्रो अवस्था आएको छ र त्यो अवश्यपनि भारतको लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो,' उनले भने।
'यस अघिका आर्थिक संकट भनेका वृहद् आर्थिक संकटहरु थिए जोसँग जुध्नका लागि प्रमाणित आर्थिक औजारहरु थिए,' उनी भन्छन्, 'तर यतिबेला हामी यस्तो आर्थिक संकटसँग जुध्दैछौं जुन महामारी हो र यसले समाजमा अनिश्चितता र त्रास पैदा गरिदिएको छ। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति नै यस्तो आर्थिक औजार हो, जसले यस विपत्तिको डटेर सामना गर्न सक्छ तर यतिबेला यो नीति पनि बोधो देखिएको छ।'